Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “ခေတ်ကိုဖွင့်တဲ့ . . . သော့” ♫
♪ “ခေတ်ကိုဖွင့်တဲ့ . . . သော့” ♫
ဂရေဟမ်ဘဲလ်ကနေအစပြုခဲ့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုကနေ ယနေ့ခေတ်မိတ်ဆွေတို့လက်ထဲမှာ ကွယ်ဝှက်ကိုင်ထားဖို့မလိုတဲ့စမတ်ဖုန်း တွေရှိနေပြီမလား၊အကွာအဝေးတွေကိုချုံ့ပစ်ဖို့၊ကိုယ့်အမှတ်ရခြင်းတွေsave လုပ်ထားဖို့၊ကိုယ့်စကားတွေစာသားဖြစ်ဖို့၊ကိုယ့်ဝေဖန်လေကန်ရေးကအစ၊ ကမ္ဘာအနှံ့နေရာအနှံ့လူမျိုးအစုံကိုစကရင်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကနေ ဝေဖန် လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရှုဖို့ဒီလို မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးကိုမရှိမဖြစ်အဆင်တန်ဆာတစ်ခုအနေနဲ့ကိုအသုံးပြုဖို့လိုတယ်မလား။ကျဉ်း ကျဉ်းလာတဲ့ကမ္ဘာမှာ တယ်လီကွန်း၊ဖိုက်ဘာမျှင်အစရှိသဖြင့်ကုတ်တွေကနေအခြေခံတဲ့AI တွေ၊ Robort တွေ ဖြစ်ဖွယ်မရှိတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်တွေကနေအပြင်ကိုထွက်လာ ကြပြီ မဟုတ်လား။
မိတ်ဆွေရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအမျိုးအစားမှာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပါပါနေ ပါသလား၊ယုတ္တိဗေဒဆန်ဆန်မေးခွန်းတွေနဲ့ကစားပွဲကိုစလိုက်ကြရအောင်၊ တစ်နေ့မှာမိုဘိုင်းဖုန်းကိုဖုန်းပြောဖို့တင်မဟုတ်ဘဲကြည့်မိတဲ့အကြိမ်အရေ အတွက်၊ဆိုရှယ်မီဒီယာအပါအ၀င်တခြားSocial Platform တွေပေါ်မှာလွှင့်နေ မျှော်နေတဲ့အကြိမ်အရေအတွက်၊နှစ်သက်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ရဲ့MTV တွေကိုYoutube ပေါ်မှာခံစားမိနေတဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ဘယ်လောက်များ ရှိနေမလဲ၊စစ်တမ်းကောက်သူအချို့ရဲ့အဆိုအရ…ဒါဟာရောဂါတစ်မျိုးပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့။စာသင်စာကျက်သလိုမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအချိန်ဇယားနဲ့အသုံးပြုဖို့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကမှplan ချထားခဲ့မယ်မထင်ဘူး။ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး တွေအရမမြင်နိုင်တဲ့ ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှု၊ယာဉ်ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးလှုံ့ဆော်စာတွေအရယာဉ် မောင်းစဉ်လက်ကိုင်ဖုန်းမပြောရ၊ ဆီဆိုင်အတွင်းမိုဘိုင်းဖုန်း ယူဆောင်မလာရ၊မပြောရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ တွေမှာ ..လိုက်လိုက်နာနာရှိခဲ့ကြပါသလား။အထူးအဆန်း လုပ်ပြောကောင်း ပြောနေတယ်ဆိုပေမယ့်မိနစ်ပေါင်း၁၄၄၀မှာဘယ်လောက်ပမာဏဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးတည်းမှာစိတ်ရောက်နေမလဲ၊မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးဟာ မိတ်ဆွေကိုအောက်ပါအချက်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားတယ်ဆိုပါစို့……။
မျက်နှာအသွင်အပြင်အရွယ်အစားသေသပ်လှပမှု၊Branded Model၊ ကွန်ရက် ကောင်းမွန်မှု၊Social Apps၊Data ပြည့်ဝစွာအသုံးပြုမှု၊ကင်မရာ၊ဂိမ်းအစ ရှိသဖြင့်ပေါ့၊မိတ်ဆွေရဲ့တစ်နေ့တာ၂၄နာရီမှာမိတ်ဆွေသူရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမှာ ဘယ်လောက်ထိပေးခဲ့ရသလဲ။မိတ်ဆွေရဲ့အချိန်တွေကိုပေါ့၊အကျိုးရှိတဲ့ အသုံးချမှုတွေပါကွာလို့မိတ်ဆွေစောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာကားစောင့်တဲ့ အခါ၊မိတ်ဆွေမီးရထားစီးတဲ့အခါ၊မိတ်ဆွေ အဌားယာဉ်ပေါ်က နေပြင်ပကိုကြည့်မိတဲ့အခါ၊မိတ်ဆွေနာရေးတစ်ခုကို သွားတဲ့အခါအစရှိသဖြင့် မြင်တွေ့ရမှုတွေမှာစမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှု အပေါ်မျောပါနေတဲ့ရဟန်းရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်နေရသလဲ၊တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာတယ်လီကွန်းကဏ္ဍဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့Bomb ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေ ..လူဦးရေသန်း၆၀ ကျော်ရှိတဲ့အခြေအနေမှာ ဆင်းကတ် သိပ်သည်းဆတွေတစ်ဟုန်ထိုးတက်လာတဲ့အခါစမတ်ဖုန်း၊ Feature ဖုန်းအစရှိသဖြင့်အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်ဖို့ခဲယဉ်းကောင်းခဲယဉ်း ပါလိမ့်မယ်။Facebook ဆိုတဲ့social app တစ်ခုတည်းကိုတောင်လူသန်းချီ အသုံးပြုနေပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်တမ်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရစမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါလာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ထဲမှာမှ အော်ပရေတာအသစ်နှစ်ခုဝင်လာခဲ့ တဲ့နောက်ပိုင်း၂၀၁၃ခုနှစ်မှာမိုဘိုင်း ဖုန်းသုံးစွဲမှုဟာ၁၀ရာခိုင်နှုန်း၊၂၀၁၄မှာ၂၇ရာခိုင်နှုန်း၊၂၀၁၆နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့၈၀ရာခိုင်နှုန်း၊၂၀၁၉မှာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့၉၀ရာခိုင်နှုန်းကို ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ခန့်မှန်းထားတာတွေ ..အခုလက်ရှိမှာလည်းစတုတ္ထအော်ပရေတာပါ ထပ်မံပါဝင်လာခဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ခေတ်တွေကို စောင့်ကြည့်ဖြတ်သန်းဖို့တော့လိုမယ်မလား။
မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးတည်းကလူမှုကွန်ရက်တွေကိုအသုံးချခြင်းတွေကနေ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွေကနေလူအချင်းချင်းသိရှိလာကြမှုများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးသီးသန့်ဆန်စွာရှိနေခဲ့တဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိသိသာသာ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေလက်ရှိခေတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကို လည်း မြင်နေတွေ့နေရပါတယ်။အဆိုးဘက်ကိုဦးတည်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေက လည်းမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး၊Application တစ်ခုကနေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြတာ လည်းယခင့်ယခင် ဆောင်းပါးတွေထဲဖတ်မိဖူးခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။မိုဘိုင်းဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုင်တွယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမှာယခင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုမရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေကနေအခုအပြိုင်အဆိုင် အော်ပရေတာတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ ကိုကြိုက်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဟန်းဆက်ပေါ်ကနေအသုံးပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေ။ အမေရိကန်မှာဆိုရင်ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ၁၀၀,၀၀၀ကနေ၁၅၀,၀၀၀ရှိတဲ့ နေအိမ်၉၂ရာခိုင်နှုန်းကbroadband အင်တာနက်အသုံးပြုနေပြီးတော့ ၀င်ငွေကန်ဒေါ်လာ၂၅,၀၀၀ရှိတဲ့ နေအိမ်ထက်ဝက်ခန့်လောက်က မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုနေကြကြောင်းစစ်တမ်းတွေတချို့ကဆိုတယ်။အခမဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်အသုံးပြုကြဖို့အရင့်အရင်ISP တွေလုပ်နေကြပေမယ့်အပြောင်းအလဲ တွေကြားမှာဝိုင်ဖိုင်free zone ဆိုတာကိုမိုဘိုင်းဖုန်းကအင်တာနက်လိုင်း ကောင်းမကောင်းလောက်သာဂရုပြုသုံးစွဲမယ့်သူလက်ချိုးရေလို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလူတန်းစေ့မဖြစ်နိုင်သေးပေမယ့် ငွေကြေးအရတိကျတဲ့ စစ်တမ်းတွေရှိမလာသေးပေမယ့်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အ၀ရတဲ့အထိအားသွန် ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အော်ပရေတာတွေကို တွေ့နေရတဲ့အတွက် နေရာအနှံ့4G မကြာမီလာမည်ဆိုတဲ့ခေတ်ကောင်းကောင်းတွေကို မြင်တွေ့ ရဖွယ်ရှိပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနဲ့သမုဒ္ဒရာကျွန်းနိုင်ငံတွေမှာ သုံးနေကြ တဲ့ဟန်းဆက်တွေရဲ့၂၅ရာခိုင်နှုန်းကစမတ်ဖုန်းတွေပဲဆိုတဲ့ ပြောကြားချက် ကိုယခင်စမတ်ဖုန်းBrand တစ်ခုဖြစ်တဲ့Sony နဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီးအခုသီးသန့် အဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့Ericsson ကထုတ်ပြန်တယ်။စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ဟာတဖြည်းဖြည်းအရေးပါလာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ခေတ်တော်တော်များများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပြီးမဟုတ်ပါလား။ မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတည်းကမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုအဖွံ့ဖြိုးဆုံးထိပ်တန်းလေးနိုင်ငံထဲမှာပါတယ် ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးပေါ်ကနေ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ခေတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပါပဲ။ မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာအခြေခံပြီးစီးပွားလူမှုအဆောက်အဦတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့တခြားသောနိုင်ငံတွေလို ကွန်ရက်ပြည့်စုံစိတ်တိုင်းကျရမှုမှာလှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ကတော့ဖားခုန်ခုန်ပြီးလိုက်မှရမယ်လို့ တချို့ တချို့သောပညာရှင်တွေအချို့ကဆိုပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှု၊လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုဟာ နေရာဒေသမရွေးအရှိန် အဟုန်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အပေါ် သုံးသပ်သူတွေရဲ့အဆိုအရ၂၀၂၀မှာကျွန်တော် တို့မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရမလား၊လိုက်ပါစီးမျောသွားမလား၊မိုဘိုင်း ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ခေတ်တွေကိုတည်ဆောက်နေမလား၊ ဘ၀တွေကိုတည်ဆောက်နေမလား၊လုပ်ငန်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေမလား၊နိုင်ငံ ရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်း မာရေးအစရှိသဖြင့်…ဘာတွေကိုအကျိုးရှိရှိ လုပ်ဆောင်နေကြမလဲ။မိတ်ဆွေသင်ကောကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးပေါ်ကဘယ်ခေတ်ထဲမှာပါဝင်နေသလဲ ဆိုတာ။